Nagu saabsan - Shirkadda Beijing IWHR (BIC)
Baaxadda ganacsigu badanaa waxay daboolaysaa:
BICinta badan waxay ka shaqeysaa cilmi baarista dhinacyada farsamada la xiriira sida dibedda iyo ilaha biyaha qaranka iyo quwadda tamarta, isgaarsiinta, tamarta, tareenka, injineernimada dowladda hoose, dhismaha iwm; Baaritaanka injineernimada iyo qaabeynta, dhismaha, kormeerka, la-talinta iyo qiimeynta, kormeerka iyo kormeerka, EPC; cilmi baarista iyo horumarinta, soo saarista iyo iibinta qalabka injineernimada cusub, qalabka la socodka iyo nidaamka ku saleysan macluumaadka, qalabka daaweynta biyaha, iyo qalabka elektaroonikada; iskiis u shaqeysta oo wakiil ka ah soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga nooc kasta oo badeecad iyo tiknoolajiyad ah.
Bixiso naqshad la taliye, dhammaystiran, qandaraaska mashruuca rakibaadda qalabka iyo adeegga iibka kadib ee mashaariicda injineernimada ilaalin yar iyo dhexdhexaad ee; Naqshadeynta, soo saarista iyo rakibidda biyo xireennada caagga ah, biyo xireennada wiishka ee korantada;
BIC waa shirkad horseed u ah qalabka daaweynta biyaha iyo dhismaha Shiinaha waxayna leedahay koox xirfadlayaal ah oo naqshadeeyayaal ah, injineero iyo shaqaale maamul. Waxaan sidoo kale bixinaa la-talin farsamo waxaanan ka shaqeynaa mashaariicda injineernimada, soo iibsiga iyo dhismaha (EPC) ee aagagga soo socda: daaweynta dawada wasakhaysan ee degmada (ETP), daaweynta biyaha wasakhda ah ee warshadaha (haraaga haraaga ah, daabacaadda iyo dheehida biyaha wasakhda ah, qashinka biyaha wasakhda ah, iyo kiimikada warshad qashinka) , Mashaariicda biyo siinta iyo daaweynta noocyada gaarka ah ee biyaha (arsenic water, fluorinated water, forum-manganese water and brackish water) .Kadib dhowr sano oo cilmi baaris ah kadib, BIC waxay soosaartay taxane ah alaabada daaweynta biyaha ee laxiriira oo ay kamid yihiin: Ultra Filtration (UF) ), Reverse Osmosis (RO), Membrane Bioreactor (MBR), Nadiifinta Badaha, Ka saarida Saliida iyo Dhirta Daaweynta Biyaha ee keydsan, iyo Bamka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida. Alaabadani waa kacaan waxaana lagu heli karaa qiimo macquul ah.
Soo Dejinta & Dhoofinta Ganacsiga
Wax ka qabashada soo dejinta iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee badeecadaha waafaqsan siyaasadaha gobolka madax bannaan ama wakiil ahaan;